FBC - Sabbataatti ragaa sobaatin uummata burjaajessaa kan turan to'annoo jala oolan
Sabbataatti ragaa sobaatin uummata burjaajessaa kan turan to'annoo jala oolan
Finfinnee, Amajjii 3,2009(FBC) - Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee, bulchiinsa magaalaa Sabbataatti shakkamtoonni ragaa sobaatin ummata burjaajessaa turan 3 to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin beeksise.
Namoonni kanneen hojjettoota Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa of fakkeessuun gochoota goyyomsoo, sodaachisoo fi baajii sobaa hojjechiifachuun daldaltoota irraa sababii maaf vaatii hin kaffaltaniin Birrii guuraa turan jedhameera.
Keessattu galii mootummaaf galuu qabu, Birrii kuma 50 kanfaluurra nuuf Birrii kuma 6 kennuu isinii wayya jechuun hawaasa daldalaa gowwoomsaa turan jedhan abbaan adeemsa hojii kutaa qorannoo yakkaa kutaa magaala Alam Ganaa 2ffaa gargaaraan Inispeektaraa Zargaabbachoo Hayilamaariyaam.
Shakkamtoonnis dhimmi isaanii qulqullaa'ee seeratti kan dhiyaatan ta’a.
Oduuwwan Biroo « Mariin haaromsa hojjattootaa sadarkaa naannootti boor eegala	Mootummaan federaalaa fi naannoleen paartilee addaddaan osoo bulanii seerri hariiroosaanii murteessu qophaa’e »